क्वान्टम कम्प्युटरले के गर्दछ र कसरी काम गर्दछ? | ग्याजेट समाचार
पाको एल गुटेरेज | | सामान्य
हामीले सबै कुनै समय क्वान्टम कम्प्युटर शब्दहरू सुनेका छौं, तर सामान्यतया धेरैलाई यो साँच्चिकै हो भनेर थाहा हुन्छ। धेरैका लागि, पहिलो कुरा दिमागमा आउँछ एक धेरै शक्तिशाली निजी कम्प्यूटर हो, कुनै कार्य गर्न सक्षम छ तर अधिकतम गतिमा, तर यो साधारण सुपर शक्तिशाली कम्प्युटर होईन, यो त्यो भन्दा धेरै हो।
यद्यपि यी मेशिनहरू सामान्य जनताको पहुँचबाट टाढा छन्, तिनीहरूले धेरै जिज्ञासा उत्पन्न गर्छन्। यस लेखमा हामी क्वान्टम कम्प्युटर के हो र के यसको सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ र क्वान्टम घटना के हुन् जसमा यसको शक्ति आधारित छ वर्णन गर्दछौं।
1 क्वान्टम कम्प्यूटर भनेको के हो?
2 क्वान्टम कम्प्युटरले कसरी काम गर्दछ?
2.1 एक Qubit के हो?
2.2 क्वान्टम सुपरपोजिसन भनेको के हो?
2.3 क्वान्टम उल्टो
3 गुगलको क्वान्टम कम्प्युटर
क्वान्टम कम्प्यूटर भनेको के हो?
क्वान्टम कम्प्युटरहरू विशाल मेसिनहरू हुन् जसले प्रशोधन शक्तिमा ठूलो बृद्धि गर्न क्वान्टम मेकानिकको केही घटनाहरूको फाइदा लिन्छन्। क्वान्टम कम्प्युटरहरू कुनै परम्परागत सुपर डेस्कटप कम्प्युटरमा बिटुमेनसँग राख्न सक्षम छन्। केहि चीज जसलाई प्राय क्वान्टम वर्चस्व भनिन्छ।
के यसको मतलब यो हो कि हामी सबैको इन्टरनेट सर्फ गर्न वा भिडियो गेमहरू खेल्न घर क्वान्टम कम्प्युटर हुन्छ? पक्कै छैन। क्लासिक मेशिनहरू हाम्रो समस्याहरूको समाधान गर्न र हाम्रो अन्तरक्रियात्मक फुर्सतको आधारमा दुबै सामान्य समाधानको रूपमा जारी रहनेछ। सबैभन्दा किफायती पनि।
क्वान्टम कम्प्युटरहरू विज्ञान, चिकित्सा वा आनुवंशिकी जस्ता प्राविधिक अग्रिमका विभिन्न क्षेत्रहरूका लागि बृद्धि हुने वचन दिन्छन्। केही कम्पनीहरूले उनीहरूको नयाँ उत्पादनहरू विकास गर्न प्रयोग गर्न सुरु गरिसक्यो, जस्तै नयाँ लाइटर र अधिक टिकाऊ सामग्री पूर्णतया तापीय ईन्धन प्रतिस्थापन गर्न।
क्वान्टम कम्प्युटरले कसरी काम गर्दछ?
यी मेशिनहरू तिनीहरूले पारंपरिक हार्डवेयर मा आफ्नो शक्ति आधार छैन, हामी हाम्रो घर कम्प्युटरमा फेला पार्न सक्ने एक जस्तै, यो ठूलो मापनको ग्राफिक्स कार्ड र प्रोसेसरको बारेमा होईन, यो भन्दा धेरै जान्छ, दुवै मात्रा र जटिलतामा। क्वान्टम कम्प्युटरको शक्तिको रहस्य यसको क्वान्टम बिट्स उत्पन्न गर्न र चलाउन सक्ने क्षमतामा निहित छ क्विबट्स
एक Qubit के हो?
परम्परागत कम्प्युटरले बिट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स… प्रयोग गर्दछ। विद्युतीय वा अप्टिकल दालहरूको स्ट्रीम जसले प्रतिनिधित्व गर्दछ र शून्य। ईमेल, वेबसाइट वा चलचित्रबाट सम्पूर्ण भर्चुअल संसार जुन हामी अनलाइन हेर्छौं, शून्य र शृंखलाहरूको लामो श्रृंखलाको लागि आवश्यक छ।
क्वान्टम कम्प्युटरहरूले क्विट, सबटामिक कणहरू जस्तै इलेक्ट्रोन वा फोटोनहरू प्रयोग गर्दछ। केहि कम्पनीहरु को दृष्टिकोण को जस्तै गुगल सुपरकन्डक्टि circ सर्किटमा निर्भर गर्दछ जुन गहिरा ठाउँ भन्दा कम तापमानमा चिस्याइएको थियो। अरूले इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फिल्डमा खाली परमाणुलाई सिलिकॉन चिपमा पासो पार्छन्। दुबै केसहरूमा लक्ष्य भनेको क्विबट्सलाई नियन्त्रित क्वान्टम राज्यमा अलग गर्नु हो।
क्युबिट्ससँग केहि विशिष्ट गुणहरू छन्, जसले उनीहरूको समूहलाई बाइनरी बिट्सको समान संख्या भन्दा बढी प्रशोधन शक्ति दिन सक्षम बनाउँदछ। सब भन्दा महत्त्वपूर्णलाई सुपरपोजिसन र क्वान्टम इन्ang्गलमेन्ट भनिन्छ।
क्वान्टम सुपरपोजिसन भनेको के हो?
क्वान्टम सुपरपोजिसन प्रकृतिमा देखा पर्दछ, जब एक प्राथमिक कणले सँगै दुई वा सोभन्दा बढी राज्यहरू अधिकार गर्दछ, जुन फोटोनहरूसँग हुन्छ। तिनीहरू एकै समयमा दुई फरक ठाउँमा रहन सक्दछन्, जुन साधारण भौतिक संसारमा अकल्पनीय कुरा हो।
यो सम्पत्ति अन्य कणहरू जस्तै इलेक्ट्रोन वा न्युट्रनहरूमा पनि देखिएको छ, परमाणुहरूमा वा साना अणुहरूमा पनि। यस यात्राले वैज्ञानिकहरूलाई सोच्न बाध्य तुल्यायो कि यो क्वान्टम संसारको बीच कहाँ छ र हामी वास्तविक संसारलाई के भन्छौं, जब कण क्वान्टम हुन छोड्छ र ज्ञात शारीरिक कानूनको अधीनमा पर्दछ।
यस घटनाको लागि धन्यवाद, धेरै ओभरल्यापिpping क्विट्सको साथ क्वान्टम कम्प्युटर एकै साथ सम्भावित परिणामहरूको ठूलो संख्यामा आउन सक्छ।
तपाइँ "जोडिएको" क्विट्सको जोडी उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ दुबै समान क्वान्टम राज्यमा अवस्थित छन्। कुनै एकको अवस्था परिवर्तन गर्नुहोस् यो तुरुन्त एक अर्काको स्थिति पूर्वानुमान योग्य तरीकाले बदल्छ, यो हुन्छ यदि तपाई टाढा टाढा हुनुहुन्छ भने पनि।
यो निश्चित रूपमा थाहा छैन कि क्वान्टम ईन्ट्या ent्गमेन्ट वास्तवमा कसरी काम गर्दछ। अल्बर्ट आइनस्टाइन आफैलाई भ्रममा पार्न सक्ने कुराले, जसले यसलाई "टाढामा एक डरलाग्दो कार्य" भनेर वर्णन गर्दछ।। क्वान्टम कम्प्युटरहरूको लागि उनीहरूको महान शक्ति प्राप्त गर्न ईन्जालमेन्ट महत्त्वपूर्ण छ। परम्परागत कम्प्युटरमा, बिट्सको स doub्ख्या दोब्बर पार्नाले यसको प्रसंस्करण शक्ति दोब्बर गर्दछ। क्वान्टम कम्प्युटरको मामलामा, थप क्विट्स थपेमा यसको क्षमतामा घनिष्ट वृद्धि हुन्छ।
यी मेशिनहरूले अपरेसनहरू गर्न क्वान्टम डेजी चेनको एक प्रकारको उल्टो क्विटको फाइदा लिन्छन्। मेशिनहरूको क्षमता विशेष डिजाइन क्वान्टम एल्गोरिदमसँग गणनाको गति बढाउने कारण उनीहरूले यति उत्साहित गर्छन्।
तर क्वान्टम कम्प्युटरहरूको लागि जब सबै कुरा असाधारण हुँदैन, किनभने तिनीहरू त्रुटिहरूमा अति संवेदनशील हुन्छन्, कम्प्युटेसनल विसंगतिको कारण।
यो एक घटना हो जसले क्वान्टम व्यवहारलाई क्षय बनाउँछ र अन्ततः तिनीहरूको वातावरणको साथ क्विट्सको अन्तरक्रियाको कारण हराउँछ किनभने उनीहरूको क्वान्टम अवस्था एकदम कमजोर छ। हल्का कम्पन वा तापमान परिवर्तनले कार्य समाप्त हुनुभन्दा पहिले यी ओभरल्यापबाट बाहिर आउन सक्छ। यस कारणको लागि, क्विट्स प्राय: रेफ्रिजरेटर र भ्याकुम कक्षहरूमा धेरै कम तापक्रममा भण्डारण गरिन्छ।
गुगलको क्वान्टम कम्प्युटर
उत्तर अमेरिकाको विशाल, क्वान्टम टेक्नोलोजीको कुरा आउँदा गुगलले पछाडि छोड्न चाहेको छैन २०० सेकेंडमा गणना गर्न सक्षम क्वान्टम कम्प्युटर विकसित भएको छ, जुन परम्परागत सुपर पीसीमा १० हजार बर्ष लाग्यो। यसैले यो घोषणा गर्दछ कि क्वान्टम कम्प्युटरहरू निकट भविष्य हो। यद्यपि यसको प्रतिस्पर्धा आईबीएम सहमत हुन समाप्त गर्दैन।
तटस्थ अनुसन्धानकर्ताहरूले देखाउँछन् कि गुगलको क्वान्टम कम्प्युटरले एक अनियमित संख्या गणना गर्नुपर्‍यो जुन मात्र सफल हुन सक्दछ यदि कम्प्युटरका सबै कम्पोनेन्टहरू पूर्ण मेलमिलापमा काम गरिरहेका थिए।
गुगलले यस दौडमा पछाडि पछाडि नराख्ने योजना बनाएको छैन त्यसैले यस प्रविधिमा धेरै पूँजी लगानी गर्ने वाचा गर्दछ। गुगलको सन्दर्भमा हामी यो कुरालाई ध्यानमा राख्न सक्दछौं, यद्यपि आईएमबीले बेकारमा बस्न चाहेको छैन किनकि यसका अधिकांश स्रोतहरू हाल यस प्रविधिलाई सुधार गर्न समर्पित भइरहेको छ। Google ले आफै क्वान्टम सर्वोच्चता विकास गर्न सक्षम छ वा यो यसको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन आवश्यक छ कि समय बताउँछ।
यो एउटा प्रविधि हो रोगहरू निको पार्न सक्षम औषधीहरूको विकासमा हामी सबैलाई फाइदा पुग्न सक्छ अहिलेसम्म असाध्य
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » क्वान्टम कम्प्युटरले के गर्दछ र कसरी काम गर्दछ?